BROILER ROSS-708: SHARAXAADDA IYO SIFOOYINKA CONTENT - BEERAHA DIGAAGA
Broiler iskaga gudbaan ROSS-708
Digaagga barbaarinta si ay u soo saaraan hilibku waxay dhiirrigeliyeen in ay kor u qaadaan shaqooyinka ku saabsan hagaajinta digaagga digaaga, oo ah, si loo dedejiyo koritaankooda, si ay u yeeshaan qulqulka murqaha.
Mid ka mid ah noocyada broiler waa ROSS-708.
Ku saabsan sifooyinka iskutallaabta iyo xaaladaha sii kordhaya maanta.
Nooca caanka ah waxaa lagu yaqaanaa adduunka oo dhan "ROSS" oo leh "Aviagen", oo ku hawlan taranta, kor u qaadida iyo bixinta digaagga adduunka. Xafiisku wuxuu ku yaalaa UK, waxaa jira xafiisyo matalaya Yurub, Mareykanka, Ruushka, Latin America, Turkiga iyo wadamo kale.
ROSS-708 waa geddis, oo la badeeco ah oo ka dhalatay iskutallaabta isweydaarsiga ah ee dhowr nooc, oo lagu garto koritaan degdeg ah. Noocyada soo socda ee hilibka soo socda ayaa markii hore loo adeegsaday waalidkii broiler: Boytsovy Kornish, New Hampshire, Langshan, Jersey Black Giant iyo Brahma.
Baro naftaada ugu fiican ee broilers, sida si habboon u ilaalinta iyo quudin broilers, sida loo koro hubbada broiler.
Marxalado dhowr ah oo ka soo gudbaya dhowr xariiq oo ka mid ah carruurtooda, oo la siiyay is-waafajinta naasuhu, waxay keeneen iskutallaabta taranta.
Ma taqaanaa? Ereyga "broiler" wuxuu ka yimid ingiriis "broil"taas oo macnaheedu yahay "shiil dabka saar".
Muuqaal iyo muuqaal jireed
Dhanka kale, waa shimbir aad u ballaaran, oo leh cufan xoog leh iyo lafo ballaadhan. Madaxa waa yar yahay, gadhka iyo shanlaha waa casaan. Guluubka waa la jeexay, jaalle. Qoorta shimbirku waa dherer dhexdhexaad ah, si habsami leh u dhaqaaqa dhabarka.
Daboolku wuu gaaban yahay, wax yar baa yaraaday. Pawsku waa awood, oo leh faro dheer, maqaarka jaalaha ah. Maydka cad, bucadku waa adag yahay jirka.
Tayo waxtar leh
Waxsoosaarka ROSS-708 wuxuu ka tarjumayaa kalsoonida qoysaska yaryar iyo beeraha waaweyn ee digaaga.
Precocity iyo dhadhanka hilibka
Digaagga waxaa lagu kala gooyay qadar sare: maalin kasta kor u kaca ilaa 58 garaam. Horeba da'da soddon iyo shan cisho miisaankoodu wuxuu gaari karaa 2.9 kg, markuu gaaro da'da afartan cisho miisaanka wuxuu u dhigmi karaa 3.7 kg.
Carcass Tuugada waxaa lagu kala soocaa tiro yar oo lafaha ah, naaso weyn iyo lugaha waaweyn. Maqaarka baqtigu waa iftiin, oo leh kobaca sida ugu dhakhsaha badan uma hayo waqti jaale ah. Hilibka wuxuu leeyahay sifooyinka dhadhanka sare, dhexdhexaad ah jilicsan iyo casiir leh.
Waa muhiim! Haysashada digaagga in ka badan 60 maalmood laguma talin: da'daas marka la barbar dhigo miisaanku wuxuu istaagaa, iyo dhadhanka hilibka ayaa ka sii dari kara.
Wax soo saarka ukunta
In broilers, mabda 'ahaan, wax soo saarka ukunta hooseeya, laakiin digaag weyn oo iskutallaabta ah waa digaag aad u fiican, intaa waxaa dheer, hybrid leeyahay hatchability sare ee ukunta ka soo kobcinta.
Baro sida loo kordhiyo wax soo saarka ukunta ee digaagga, waxa fiitamiinada u dooranaya ukunta wax soo saarka ee digaagga.
Wixii miisaan degdeg ah dhakhso ah, digaagga waxay u baahan yihiin cunto isku dheeli tiran, hodan ku ah macdanta iyo fitamiinada dheeraadka ah, hadhuudh iyo cagaarka.
Digaagga dhawaan dhashay waxaa lagu quudin jiray farmaajo iyo ukunta la kariyey, laga bilaabo saddex cisho - oatmeal la jarjarey. Waxaad u baahan tahay inaad cabto biyo, iyo decoction (chamomile). Cagaarka shan-cirridka la isku duro (caleenta cagaaran, caano fadhi), bran.
Waxay kaa caawineysaa inaad barato sida si habboon loogu quudiyo digaagaha broiler, sababta oo ah digaagga broiler u dhintaan iyo sida loo daweeyo cudurada faafa ee aan faafin ee broilers.
Marka la gaaro da'da toban-cisho, shimbirta waxaa la siiyaa miro la jarjaray, khudaarta la kariyey, iyo jilicsanaan iyo qolof la jajabiyey.
Dadka waaweyni waa la quudiyay:
khudaarta la kariyey;
ku dar dushooda khudradda, cagaarka løvetann;
diyaariso mash (jiis ama caano fadhi);
Biyaha cabbayaasha waa in la kariyaa, si looga hortago, waxaad ku dari kartaa kaneecada.
Waa muhiim! Laguma talin karo in la cuno dufanka dabacsan ama miraha dalagga dabacsan: waxay leedahay saameyn jilicsan.
Tobanka maalmood ee ugu horreeya ee xayawaanka yaryar waxaa lagu hayn karaa qafis, laakiin ka dib markaa waa la jecel yahay in loo wareejiyo qol ballaaran.
Gurigu waa inuu noqdaa mid ballaaran, isagoo tixgelinaya tirada xoolaha, qallalan iyo diiran. Digaagga, heerkulka lagu taliyey waa + 32 ° S, dadka waaweyn - + 24 ° S, qoyaanku ka hooseeya 60%.
Baro sida loo doorto coop digaag, sida loo sameeyo coop digaag leh gacmahaaga, sida loo qalabeeyo digaag digaag ah jiilaalka, sida loo sameeyo qulqul iyo adigana samee.
Qolka waa inuu lahaadaa hawo hawo leh hawo-qaadasho ama ikhtiyaarka kale ee hawo-qaadista, waa in sidoo kale laga ilaaliyaa isticmaalka jiirka. Ka hor inta aanad dejin shimbirta, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo nidaamka jeermiska.
Qashinka dabaqa ah waxaa laga sameeyaa alaabta dabiiciga ah: balka, cawska. Waxay ubaahantahay in si joogto ah loo badalo. Dhumucda qashinka waxaa lagu maamulaa iyadoo ku xiran dhulka iyo heerkulka qolka. Guriga waxaa lagu qalabeeyaa qalabka korontada iyo nalalka, labadaba dadka waawayn iyo xayawaanka yaryar.
Naqshadda unugga ayaa kuu oggolaaneysa inaad si deg deg ah oo sax ah u saarto, beddesho qashin, ka saar alaabooyinka qashinka. Xulashada ugu wanaagsani waa santuuqa dib loo soo celin karo.
Unugyada waa in lagu dhejiyaa qol diiran oo qallalan, sida diyaarinta iyo qoyaanka shimbiraha dhalinyarada ah ayaa burburaya. Iftiiminta ayaa ku filan 40 W, hawo cusub ayaa loo baahan yahay.
Cabbirka qafiska waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo astaamahan soo socda - aan ka badnayn darsin darsin halkii m2, maaddaama baahi dheeraad ah ay u baahan tahay inay koraan.
Ma taqaanaa? Inkastoo fikradda baahsan ee ku saabsan nacaybka digaagga, tani maaha mid run ah. Shakhsiyaadka gudaha waxay awoodaan inay xusuustaan ​​martida, waxay is bar-baraan waqtigooda, waxay go'aansadaan wakhtiga quudinta, iyo xasuustaan ​​qabaa'ilka walaalahooda. Haddii muddo ah mid ka mid ah shimbiraha la soo qaado oo markaas dib loo soo celiyo, waa la aqoonsan doonaa waana la aqbali doonaa. Isla mar ahaantaana, qof qalaad wuxuu noqon karaa mid cakiran oo xitaa gardarro leh.
Hilibka digaaga, oo ay ku jiraan hilibka broiler, waa cuntooyin cunto leh faa'iidooyin badan, iyo maraq ayaa muddo dheer loo adeegsaday sidii wakiil daaweyn. Faa'iidooyinka noocaani waa kuwo aan qabyo ahayn, wax soo saar badan iyo qiimaha ugu yar ee ilaalinta digaaga.